मंकीपक्स पुष्टि हुने देशको संख्या बढ्दै, के - के हुन् मंकीपक्सका लक्षण ? | आर्थिक अभियान
विविध स्वास्थ्य र जीवन शैली
जेठ ८, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीबाट अहिले विश्व राम्ररी उब्रिसकेको छैन । यस्तोमा फेरि अर्को रोगको प्रकोप देखिएको छ, मंकीपक्स । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार यूरोपको नौ ओटा देश, अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा बिफर जस्तो देखिने यो भाइरल संक्रमण पुष्टि भएको थियो । पछिल्लो समय यो सूचिमा इजरायल र स्वीटजरल्यान्ड पनि थपिएका छन् । योसँगै संक्रमण भेटिएका देशको संख्या १४ पुगेको छ ।
यूरोपमा यो रोग तीव्र दरमा फैलिरहेको छ । अहिलेसम्म युरोपका बेलायत, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, इटली र स्वीडनमा मंकीपक्सको संक्रमण पाइएको छ । संक्रमितको संख्या ९२ भन्दा धेरै रहेको बताइएको छ । प्रकोप व्यापक नभएपनि भाइरस कसरी फैलियो भन्ने जानकारी नभएकोले यसबारे सर्वसाधारणहरुमा चिन्ता बढेको छ ।
विज्ञहरुले भने कोरोना भाइरस जस्तै गरी यो नफैलिने बताइरहेका छन् । यद्यपि, भाइरस म्युटेट भइरहने र यसको नयाँ नयाँ स्ट्रेन देखिने भएकोले यसलाई रोक्ने व्यापक प्रयास भने हुनु पर्ने बताइएको छ ।
यो जनावरबाट मानिसमा सर्ने भाइरस हो । यसको लक्षण बिफरको जस्तै हुन्छ । मंकीपक्स गराउने भाइरस पनि बिफर भाइरसकै वर्गको हो । तर यो बिफरजत्तिको गम्भीर नभएको अनि कम संक्रामक रहेको बताइएको छ ।
सन् १९५८ मा बाँदरमा पहिलो पटक यो भाइरस देखिएकोले यसको नाम मंकीपक्स राखिएको हो । यो रोगले विशेषगरी अफ्रिकीहरु लामो समयसम्म आक्रान्त बनेको पाइएको छ । मानिसमा भने पहिलो पटक मंकीपक्सको पुष्टि सन् १९७० मा रिपब्लिक अफ कंगोमा भएको थियो ।
यो रोग प्रायः मध्य र पश्चिम अफ्रिकी देशका उष्णतटीय वर्षा वननजिक रहेका दूर्गम भेगमा पाइएको थियो । सन् २००३ मा अमेरिकामा पनि यसको प्रकोप देखिएको थियो । पछिल्लो समय बेलायतमा मे ७ मा पहिलो पटक यो रोग पुष्टि भएपछि क्रमशः अन्य देशमा पनि यो पाइने क्रम बढेको छ । बेलायतमा नाइजेरियाबाट आएका दुई बिरामीमा मंकीपक्सको संक्रमण पाइएको थियो ।
के - के हुन् मंकीपक्सका लक्षण ?
मंकीपक्सको संक्रमणको लक्षण ५ देखि २१ दिनसम्ममा देखिने गर्दछ । शुरुको अवस्थामा यसको लाक्षण अन्य संक्रामक रोगहरुसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु र जिउ दुख्नु, लिम्फ नोड सुन्निनु, ढाड दुख्नु, मांशपेशी दुख्नु, कमजोरी यसका यसका प्रारम्भिक लक्षण हुन् ।
यी लक्षणहरु देखिएको १ देखि ३ दिनमा अनुहारमा बिबिरा देखिन थाल्छन् । यो विस्तारै शरीरका अन्य हिस्सामा फैलिन्छन् । यी बिबिरा पानी फोका बन्छ अनि फुट्दै, सुक्दै जान्छन् । यस्ता डाबर निकै चिलाउने खालका हुन्छन् । डाबर फुटेर सुक्दै गएपछि विस्तारै उप्किएर जान्छ । यस्ता घाउहरु १४ देखि २८ दिनमा आफैँ निको हुने हुन्छन् ।
कसरी सर्छ मंकीपक्स ?
मंकीपक्स बादर, मुसा लगायत जनावरबाट मानिसमा सर्दछन् । मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण संक्रमित जनावरको शरीरबाट निकल्ने तरल पदार्थ अथवा रगतबाट सर्न सक्ने बताइएको छ ।
मानिसबाट मानिसमा चाँहि थुकको छिटा, फुटेको छाला वा नाक, मुख, आँखामा भाइरस परे सर्न र संक्रमण हुन सक्छ । भाइरस भएको कपडाबाट पनि सर्न सक्ने बताइएको छ । यो रोग शारीरिक सम्पर्कबाट पनि सर्न सक्ने बताइएको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा